खिम घले -
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको उम्मेदवारी दर्ता सकिएको छ । राजनीतिक दल र पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताहरु मंसिर १० को पहिलो र २१ को दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आफु र आफ्नो पार्टीलाई जिताउन भन्दै गाउँघर पुगेका छन् । उनीहरुले अनेक खालका प्रलोभन र सपनाहरु देखाउन सुरु गरिसकेका छन् । अझ यसपाली दुई वटा ठूला गठबन्धन (एमाले–माओवादीको वाम र काँग्रेस–राप्रपालगायतका दलहरुको प्रजातान्त्रिक गठबन्धन) का कारण चुनावी परिणाम अनिश्चित जस्तै छ ।
यसअघिको चुनाव र केही महिनाअघि मात्र सकिएको स्थानीय चुनावको नतिजा सरसरर्ती हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीको गठबन्धन बलियो देखिन्छ । धेरैले वाम गठबन्धनको विजय सुनिश्चित रहेको पनि बताइरहेका छन् । यद्यपी यो सुनिश्चिततलाई काँग्रेसले बनाएको गठबन्धनले अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अझ विजय गच्छदारले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक फोरमको कांग्रेसमा भएको विलयले कांग्रेसलाई उत्साही बनाएको छ ।
यि त भए चुनावमा लड्दै गर्दा दलहरुले गरेका मिलेमतोहरु । तर यो भन्दा पनि विचित्रको कुरा दलहरुको यो गठबन्धनमा चुनाव जित्ने नाममा अनेक खालका पात्राहरु उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेका छन् । दलहरुको लागि मनी र मसल उपलब्ध गराउनेहरुले ठूला दल र गठबन्धनबाट यसपाली उम्मेदवारी पाएका छन् ।
त्यस्ता उम्मेदवारहरु मध्ये अहिले चर्चामा रहेका छन्, गुण्ड नाइकेको रुपमा चर्चामा आउने गरेका दिपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङ, गणेश लामा, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हालै मात्र सफाइ पाएका लाक्र्याल लामा, डिआइजी हुँदा आइजीपीको लागि दौडधुप गर्दा चर्चामा आएर हालै मात्र राजीनामा दिएका नवराज सिलवाल । त्यसैगरेर केही महिनाअघि बीबीसीबाट राजिनामा दिएर सझा पार्टी खोलेका रविन्द्र मिश्र पनि कम चर्चामा छैनन् ।
यि त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । कोही कुख्यात र कोही विख्यातहरुले यसपालीको राजनीतिमा तरंग ल्याएका छन् । कोही अकुत सम्पतीको मुद्दामा फसेका छन्, कोही गुण्डागर्दीमा त कोही आफ्नो सेवामा चरम विवादमा परेकाहरु पनि उम्मेदवार बनेका छन् नाइएका छन् । सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा भएको व्यापक विरोधलाई वेवास्ता गर्दै दलहरुले उनीहरुलाई उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
दिपक मनाङ्गेले मनाङको प्रदेशसभा क्षेत्र नं. ख बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । सोझो हिसावले हेर्दा उनको उम्मेदवारी स्वतन्त्र देखिएपनि एमालेले व्यापक विरोध भएपछि उनको उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र बनाएको जो कोहीले बुझ्न सक्छ । मनाङ्गे राप्रपामा थिए । उनी दलबल सहित स्थानीय तहको निर्वाचन ताका एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । उनीसहितको राप्रपाका नेता कार्यकर्ताहरुको प्रवेशले स्थानीय तहको चुनावमा एमालेलाई फाइदा भयो । त्यसको गुण तिर्नकै लागि एमाले मनाङले उनलाई प्रदेशसभाको उम्मेदवारमा सिफारिस गर्यो ।
उनको सिफारिसलाई लिएर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा एमालेको उछितो काटियो । उनको पृष्ठभूमिका कारण पनि विरोध भएको हो । उनी ठमेल क्षेत्रको रात्रिकालिन व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी माथि ज्यान मार्ने उद्योग, गुण्डगर्दीलगायतका धेरै मुद्दाहरु विचाराधिन छ । उनलाई त्यस क्षेत्रमा गुण्ड नाइकेको रुपमा चित्रण गरिने गर्दछ । पार्टीमा कुनै योगदान नभएका तथा अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी दिन लागेको भन्दै व्यापक विरोध भएपनि एमालेले नयाँ जुक्ती निकाल्यो । एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारको रुपमा मनाङ्गेकै एक जना नातेदार महिलालाई उम्मेदवारी दिन लगाइयो र उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए । दावी विरोधको समयमा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार बनेकी महिलाले फिर्ता लिइन् र मनाङ्गेलाई समर्थन गरिन् । यसरी एमालेले स्वतन्त्र हो भन्ने बहाना बनाउन मिल्ने गरी उनलाई उम्मेदवार बनाई छाड्यो । मनाङ्गेलाई यसरी अनेक तिकडम मच्चाउदै उम्मेदवार बनाउनुको एउटै उदेश्य मनाङमा पहिलो पटक आफ्नो जीत सुनिश्चित गर्ने एमालेको दाउ हो ।
अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने एमाले एक्ला होइनन् । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसले पनि पार्टीमा कुनै योगदान नभएका काभ्रेका गणेश लामालाई काभ्रेको क्षेत्र नं. १ को प्रदेशसभा ख मा उम्मेदवार बनाएको छ । तर, यसको यतिधेरै विरोध समेत भएन । लामा कुनै बेला मनाङ्गेकै समुहमा सक्रिय रहेको र पछि छुट्टिएर आफ्नो छुट्टै समुह खडा गरेर, गुण्डागर्दी, हाप्ता असुलीलगायतका अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको प्रहरीको रेकर्डमा छ । पटक पटक प्रहरी पक्राउ समेत गरिरहने लामाको पनि मुद्दाहरु विचाराधिन नै छन् ।
बिजय गच्छेदारको पार्टीबाट उनीसंगै कांग्रेसमा आएका लामालाई उनीसंग रहेको केही मतकै लागि काभ्रेमा उम्मेदवार बनाएको हो । यसअघि गच्छदारको पार्टीबाट दोस्रो संविधानसभामा उम्मेदवार बनेका लामाले करिव ४ हजार मत ल्याएका थिए । उनलाई उठाएमा उक्त प्रदेशसभाको निर्वाचन सुनिश्चित हुने भन्दै उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
एमाले र कांग्रेससंगै विवादस्पल उम्मेदवार छान्ने कार्यमा माओवादी पनि पछि छैन । कांग्रेस, अनि एमाले हुँदै माओवादीमा आइपुगेका विवादस्पद व्यक्ति लाक्र्याल लामालाई माओवादीले समानुपातिकको सूचिमा राखेको छ । लाक्र्याल त्यही व्यक्ति हुन्, जस्लाई अख्तियारले झण्डै ९ करोड अबैध सम्पति भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले उनलाई उल्टै बढी आम्दानी गरेको भन्दै सफाइ दियो । उनको बैंक लकरमा गोली बरामद भएको थियो भने विवादस्पद छविकै कारण उनले एमाले सरकारमा भएको बेला अर्थ राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएक थिए ।
त्यसैगरेर धेरै चर्चित पात्राहरु मध्ये अहिले एआइजी नवराज सिलवालको नामा पनि अग्रपंक्तिमा आउने गरेको छ । सिलवाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले कांग्रेस–माओवादीको सरकारै हल्लाई दियो । तत्कालिन सत्तारुढ दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउन चाहन्थे । उनैको जोडबलमा चन्द आइजीपी बनाइए । तर, सिलवालले आफ्नो कार्यसम्पान मुल्यांकन नम्बर धेरै भएको भन्दै सर्वोच्चमा उजुरी हाले । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले सिलवालको नम्बर बढि र चन्दको थोरै रहेको भन्दै चन्दलाई आइजीपी नबनाउन भन्यो ।
तर, सरकारले नम्बरकै आधारमा हर्ने हो भने प्रकाश अर्यालको सबैभन्दा धेरै नम्बर रहेको भन्दै अर्याललाई आइजीपी बनायो । तर, सिलवाल चुप लागेनन्, शक्ति केन्द्रहरु, मडिया र अदालत धाउने काम उनले गरे । उनले देखाएको र बुझाएको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा उनैको बढी र सरकारले पेश गरेकोमा अर्यालको बढि नम्बर देखियो । सरकार र प्रहरीेले सिलवालले किर्ते गरेको आरोप लगायो । अझै पनि उनी अदालतकै आदेशको पर्खाइमा थिए । तर, केही महिनाअघि मात्र अदालतले उनको माग दावीलाई खारेज गरिदियो ।
यो सबै प्रकृयामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको विरोध गरिरहे र सिलवालको पक्षमा अभियान नै चलाए । प्रहरीले उनीमाथि किर्तेको मुद्दा चलाउने तयारी गरिरहेको बताएको थियो । तर, उनले एआइजी रहेकै बेला प्रहरी सेवाबाट राजिनामा दिए र एमालेमा प्रवेश गरे । अझै पनि उनको राजिनामा स्वीकृत भइसकेको छैन । एमालेले उनलाई ललितपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाएका छन् । उनलाई उम्मेदवारी दिनुको एउटै उदेश्य पनि जित्न सकिन्छ भन्ने नै हो ।
यि त केही प्रतिनिधि पात्राहरु मात्र हुन् । यस्ता धेरै पात्राहरु छन् । जो पहिले राजनीतिमा थिएनन् । प्रजातन्त्रका लागि जेल बसेनन्, नेल लाएनन् । अझ आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण उर्जा राजनीतिका लगाएनन् । उनीहरुले यसपाला प्रमुख दलहरुबाट उम्मेदवारी पाएका छन् । त्यस मध्ये कोही दुर्नाम छन्, कोही आफ्ना क्षेत्रका राम्रा पनि छन् ।
चुनावी बजारमा विवेकशील साझा पार्टीको उम्मेदवारहरुको पनि चर्चा छ । धेरै जसो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाहरु त्यस पार्टीमा छन् । उनीहरु नै उम्मेदवार बनेका छन् पनि । त्यसै मध्ये केही महिनाअघि बीबीसी नेपाली सेवाको प्रमुख पद छाडेर राजनीतिमा ओर्लिएका उक्त पार्टीका सहअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र चर्चामा छन् । उनी काठमाडौं क्षेत्र १ बाट उम्मेदवार बनेका छन् ।
यति मात्र होइन, यसपाला कुन पार्टीको व्यक्ति कहाँबाट उठे र कोसंग मिले भन्ने पनि रोचक रह्यो । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धनमा आएका थिए । उनले पार्टी एकीकरणमा जाने र एमालेको सूर्य चिह्नबाटै चुनाव लड्ने घोषणा पनि गरेका थिए । तर, माओवादीका नारायाणकाजी श्रेष्ठले गोरखा क्षेत्र नं. २ नछाडेपछि उनी कांग्रेससंग नजिकिए । कांग्रेसको समर्थनमा उनी गोरखाका उम्मेदवार बनेका छन् ।
रोचक झापामा पनि भयो । वाम गठबन्धनबाट निक्कै धर्मराएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले झापा ३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिंदेनलाई समर्थन गर्नकै लागि आफ्नै पार्टीका नेता कृष्ण प्रसाद सटौलालाई समानुपातिकको सूचिमा राखे । तर, सिटौला त्यो मान्न तयार भएनन् ।
सिटौलाको दवाव र स्थानीय कांग्रेसीहरुको आग्रहमा लिंदेनलाई दिने भनेको समर्थन फिर्ता भयो । सिटौला उम्मेदवार बने । तर, लगतै वाम गठन्धनका नेताहरु लिंदेनलाई समर्थन गर्न पुगे । झापामै चुनाव लडेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जित सुनिश्चित गर्ने भन्दै लिंदेनलाई वाम गठबन्धनले सघाउने निधो गर्याे । अव झापामा राप्रपा र वाम गठबन्धनबीच तालमेल भएको छ ।
यिनै घट्नाहरुले यसपालीको चुनाव रोचक बनेको छ । सिद्धान्तको आधारमा चुनाव लड्न छाडेका छन् । कुन ठाउँमा कस्को प्रभाव छ, कस्लाई उम्मेदवारी दिंदा जितिन्छ, कोसंग मिल्दा जित्न सजिलो छ भन्ने कुराको आधारमा चुनाव लडेका छन् । कोही एउटा पार्टीमा काम गरिरहेको व्यक्ति अर्कै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन् । कोही आफ्नो पार्टीले उम्मेदवार नबनाएको झोंकमा अर्को पार्टीको उम्मेदवार बन्न पुगेका छन् । कतै अपराधिक पृष्ठभूमी भएकाहरुलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । कतै राजनीतिसंग छेउटुप्प सम्बन्धै नभएकालाई पनि जित्ने नाममा उम्मेदवार बनाएका छन् । त्यसैले त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका छन्, हामी जस्तो निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेले चुनाव लड्ने जमाना गयो ।